ဟီဘရူးဘာသာစကား - ဝီကီပီးဒီးယား
Fully Transliterated Modern Hebrew Course Archived 21 August 2021 at the Wayback Machine. (with listing of verb roots and derived verbs)
Early Hebrew Newspapers Archived 18 May 2011 at the Wayback Machine., thousands of pages of mid- to late-19th-century and early 20th-century Hebrew newspapers.
Hebrew fonts Archived6September 2015 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဟီဘရူးဘာသာစကား&oldid=693329" မှ ရယူရန်
၂၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၃:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၃:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။